एटिएमको पिन ४-अङ्कको हुन्छ, किन? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०८:४१0
सहज हुने भएकाले नै एटिएम प्रयोगकर्ता अहिले बढ्दो छन्। यो सुविधाले हरेक चोटि बैङ्कबाट पैसा झिक्दा चेक अथवा भौचर भर्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्त गराउँदछ। एटिएम कार्ड चलाउनको लागि त्यसको आफ्नै व्यक्तिगत पिन नम्बर हुन्छ। तर, त्यसको पिन ४-अङ्कको मात्रै हुन्छ, किन?
सन् १९६९ सेप्टेम्बर २ मा संसारकै पहिलो एटिएम (ATM- Automated Teller Machines) मेसिन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा राखिएको थियो। अहिले यसको आविष्कार भएको पनि करीब ५० वर्ष पुग्न लागिसक्यो। र यसलाई वित्तिय क्षेत्रको ‘सबैभन्दा सुविधाजनक आविष्कार’ भन्दा फरक नपर्ला!
“एउटा अनौठो मेसिनमा अनौठो कार्ड घुसारेर पैसा झिक्न पाउने- कस्तो अचम्म!”
यदि तपाईँको कार्ड हरायो अथवा चोरी भयो, तब तपाईँको पैसालाई बचाउने एउटै मात्र सुरक्षाको उपाय ४-अङ्कको पिन नै हो। सुरक्षा कै दृष्टीले ४ भन्दा बढी अंकको पिन अझै सुरक्षित हुन्छ तर त्यसलाई किन बढि अङ्कको नबनाइएको?
स्कटिस आविष्कारक ‘जोन एड्रियन सेफर्ड- ब्यारन’ले एटिएम मेसिनको विकास गरेका थिए। उनले सुरुमा ६-अङ्कको पिनको प्रस्ताव राखेका थिए। तर उनकी श्रीमती ‘क्यारोलाइन’का कारण ६-अङ्कीय पिन प्रणाली हटाइ ४-अङ्कीय पिन प्रणाली राखिएको थियो।
हाँसो उठ्दो कुरा के छ भन्दा, ब्यारनकी श्रीमतीले याद गर्न सक्ने सबैभन्दा लामो अङ्क नै ४ वटा अङ्क थियो। त्यसैले उनले ४-अङ्कीय पिन प्रणालीको प्रस्ताव गरेका थिए, जुन पछि सम्म पनि कायम रहिरह्यो।
तथापी, विश्वमा कतिपय यस्ता बैङ्कहरू पनि छन्, जसले ६-अङ्कीय पिन प्रणालीको सुविधा दिने गर्छन्।